Aza ‘Tezitra Amin’i Jehovah’ Mihitsy | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Twi Umbundu Uruund Venda Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Ny hadalan’ny olona ihany no manimba ny fiainany, ka amin’i Jehovah no tezitra ny fony.”—OHAB. 19:3.
Inona no mety hahatonga antsika ho ‘tezitra amin’i Jehovah’?
Inona ireo hevitra dimy hanampy antsika tsy ho tezitra amin’Andriamanitra?
Inona no tokony hotadidintsika rehefa manana olana isika?
1, 2. Nahoana isika no tsy tokony hanome tsiny an’i Jehovah noho ny olana mahazo ny olombelona? Hazavao amin’ny ohatra.
AOKA hatao hoe lehilahy sambatra am-panambadiana ianao, nandritra ny taona maro. Rehefa nody anefa ianao, indray andro, dia hitanao hoe nikorontana ambony ambany ny trano. Potipotika ny fanaka sy ny vilia, ary simba tanteraka ny gorodona. Hoatran’ny nandalovan’ny rivo-doza tao amin’ilay tranonao tsara tarehy. Hilaza ve ianao hoe: “Fa inona ity nataon’ny vadiko?” Sa ianao hanontany hoe: “Fa iza no nahavita an’izao?” Azo inoana fa ilay fanontaniana faharoa no hapetrakao, satria fantatrao fa tsy ny vady malalanao mihitsy no hanimbanimba zavatra toy izany.
2 Maloto sy feno herisetra ary anjakan’ny fitondran-tena ratsy koa izao ny tany. Efa nianarantsika tao amin’ny Baiboly fa tsy i Jehovah no mahatonga an’izany. Andriamanitra fitiavana i Jehovah, ary noforoniny mba ho lasa paradisa ny tany. (Gen. 2:8, 15; 1 Jaona 4:8) Nianarantsika tao amin’ny Baiboly koa fa i Satana Devoly no mahatonga ny ankabeazan’ny olana eto an-tany. Izy no “mpitondra an’izao tontolo izao.”—Jaona 14:30; 2 Kor. 4:4.
3. Inona no hevi-diso mety hananantsika?
3 Tsy ny olana rehetra anefa no avy amin’i Satana. Vokatry ny fahadisoana nataontsika ny olana sasany mahazo antsika, ary angamba isika manaiky an’izany. (Vakio ny Deoteronomia 32:4-6.) Tsy lavorary anefa isika ka mety mbola hanana hevi-diso, izay mety hampidi-doza antsika. (Ohab. 14:12) Angamba isika hanomboka hanome tsiny an’i Jehovah noho ny olana manjo antsika, fa tsy hieritreritra hoe i Satana na isika no mahatonga izany. Mety ho ‘tezitra amin’i Jehovah’ mihitsy aza isika.—Ohab. 19:3.
4, 5. Tena mety ho tezitra amin’i Jehovah ve isika? Ahoana no mety hisehoan’izany?
4 Tena mety ho ‘tezitra amin’i Jehovah’ ve isika? Mety hitranga tokoa izany, saingy tsy hitondra mankaiza! (Isaia 41:11) Hoy ny poety iray: “Tsy ho afaka hamely totohondry an’Andriamanitra ianao satria fohy loatra ny tananao.” Mety tsy ho sahy hiteny mihitsy isika hoe tezitra amin’i Jehovah. Milaza anefa ny Ohabolana 19:3 fa “ny hadalan’ny olona ihany no manimba ny fiainany, ka amin’i Jehovah no tezitra ny fony.” Mety ho tezitra amin’Andriamanitra ao am-pony àry ny olona iray, ka hitana lolompo aminy na dia tsy miharihary be aza izany. Mety hihataka amin’ny fiangonana izy vokatr’izany, na tsy hanohana tsara ny fandaharana mifandray amin’ny fivavahana amin’i Jehovah.
5 Inona no mety hahatonga antsika ho ‘tezitra amin’i Jehovah’? Inona no hanampy antsika tsy ho tonga amin’izany? Tena ilaina ny mahafantatra ny valin’ireo, mba hahafahantsika mifandray tsara amin’i Jehovah Andriamanitra foana.
6, 7. Nahoana ny Israelita tamin’ny andron’i Mosesy no lasa nanakiana an’i Jehovah?
6 Inona no mety hahatonga ny mpanompon’i Jehovah tsy mivadika hanakiana azy? Handinika zavatra dimy mahatonga izany isika, ary hijery hoe ahoana no nahatonga ny olona sasany fahiny ho tezitra tamin’i Jehovah.—1 Kor. 10:11, 12.
Mety hisy vokany ratsy ny mihaino ny teny mahakivy lazain’ny hafa (Fehintsoratra 7)
7 Mety hisy vokany eo amintsika ny teny mahakivy lazain’ny hafa. (Vakio ny Deoteronomia 1:26-28.) Diniho izay nitranga tamin’ny Israelita. Nanao fahagagana i Jehovah ka nahatonga loza folo tamin’ilay firenena nampahory azy ireo, ary nandringana an’i Farao sy ny tafiny tao amin’ny Ranomasina Mena. Efa vahoaka afaka izy ireo, ary vonona hiditra ny Tany Nampanantenaina. (Eks. 12:29-32, 51; 14:29-31; Sal. 136:15) Tamin’izay indrindra anefa izy ireo no nanomboka nanakiana an’i Jehovah. Fa naninona izy ireo no tsy ampy finoana? Nihorohoro ny fony noho ny tatitra ratsy nolazain’ny iraka sasany avy nijery an’ilay tany. (Nom. 14:1-4) Inona no vokany? Tsy navelan’i Jehovah hiditra tao amin’ilay “tany soa” izy ireo. (Deot. 1:34, 35) Ary isika? Avelantsika hampihena ny finoantsika ve indraindray ny teny mahakivy lazain’ny hafa, ka lasa mitaraina momba izay ataon’i Jehovah amintsika isika?
8. Inona no nahatonga ny vahoakan’Andriamanitra tamin’ny andron’i Isaia hanome tsiny an’i Jehovah?
8 Mety hahakivy antsika ny olana sy ny zava-mampahory. (Vakio ny Isaia 8:21, 22.) Mafy ny nanjo ny mponina tao Joda, tamin’ny andron’i Isaia. Voahodidin’ny fahavalo izy ireo. Noana ny olona maro satria tsy ampy ny sakafo. Ny tena loza dia nisy mosary ara-panahy koa. (Amosa 8:11) Tsy nitady fanampiana tamin’i Jehovah anefa izy ireo fa nanomboka ‘nanozona’ azy sy ny mpanjaka. I Jehovah no nomen’izy ireo tsiny. Raha niharan-doza koa isika na tototry ny olana, mety hieritreritra ve isika hoe: ‘Fa taiza àry i Jehovah tamin’ny fotoana nilako azy?’
9. Nahoana no diso hevitra ny Israelita tamin’ny andron’i Ezekiela?
9 Tsy fantatsika ny zava-misy rehetra. Tsy nahalala ny zava-misy rehetra ny Israelita tamin’ny andron’i Ezekiela, ka nihevitra fa ‘tsy nety’ ny nataon’i Jehovah. (Ezek. 18:29) Nanana ny heviny momba ny atao hoe rariny izy ireo, ka izany no nataony zava-dehibe kokoa noho ny hevitr’i Jehovah. Toy ny hoe nitsara an’i Jehovah izy ireo nefa voafetra ny zavatra fantany. Ary isika? Mety tsy ho azontsika tsara ny tantara ao amin’ny Baiboly na ny zava-mitranga sasany eo amin’ny fiainantsika. Mety hieritreritra koa ve isika amin’izay hoe tsy rariny na “tsy mety” ny ataon’i Jehovah?—Joba 35:2.
10. Inona no ataon’ny olona sasany manahaka an’i Adama?
10 Tsy miaiky isika hoe tompon’andraikitra amin’ny fahotana na fahadisoana nataontsika. Nanome tsiny an’Andriamanitra i Adama, lehilahy voalohany, rehefa nanota. (Gen. 3:12) Nolazainy fa Andriamanitra no nanome azy vady ratsy, nefa izy no ninia nandika ny lalàny sady efa fantany tsara ny ho vokatr’izany. Nisy olona nanahaka an’i Adama koa tatỳ aoriana, ka manome tsiny an’Andriamanitra rehefa manao fahadisoana. Ilaintsika ny mieritreritra hoe: ‘Diso fanantenana sy tezitra ve aho noho ny fahadisoana nataoko, ka lasa mihevitra hoe hentitra loatra ny fitsipik’i Jehovah?’
11. Inona no ianarantsika avy amin’i Jona?
11 Mieritreritra be loatra momba ny tenantsika isika. Tezitra i Jona mpaminany rehefa namindra fo tamin’ny mponin’i Ninive i Jehovah. (Jona 4:1-3) Nahoana? Natahotra loatra ny ho afa-baraka angamba izy, rehefa tsy tanteraka ny teniny hoe ho ringana i Ninive. Ny lazany no nampanahy azy kokoa, ka lasa tsy nangoraka an’ireo Ninivita nibebaka izy. Mety hieritreritra be loatra momba ny tenantsika koa ve isika, ka ho ‘tezitra amin’i Jehovah’ satria mbola tsy tonga ny farany? Efa an-taonany maro angamba isika no nitory hoe akaiky ny andron’i Jehovah. Mety ho lasa sosotra amin’i Jehovah ve anefa isika, rehefa misy olona manakiana antsika satria mbola tsy tonga io andro io?—2 Pet. 3:3, 4, 9.
INONA NO HANAMPY ANTSIKA TSY HO ‘TEZITRA AMIN’I JEHOVAH’?
12, 13. Inona no tsy tokony hataontsika an-tsirambina, raha manomboka misalasala isika raha mety na tsia ny ataon’i Jehovah?
12 Inona no azontsika atao raha manomboka misalasala isika hoe mety sa tsia ny ataon’i Jehovah? Tadidio fa tsy tsara ny misalasala toy izany. Mampahatsiahy antsika ny Ohabolana 19:3 fa mety hikorontana noho ny tsy fahalalany ny fiainan’ny olona, nefa amin’i Jehovah indray izy no misafoaka. Andao àry isika handinika hevitra dimy hanampy antsika tsy hanome tsiny an’i Jehovah mihitsy, na dia misy olana mahazo antsika aza.
13 Aza atao an-tsirambina ny fifandraisanao amin’i Jehovah. Marina fa tsy lavorary isika. Tsy ho mora tezitra amin’i Jehovah anefa isika raha mifandray tsara aminy foana. (Vakio ny Ohabolana 3:5, 6.) Mila matoky azy isika. Tsy tsara koa ny mihevi-tena ho hendry na mieritreritra be loatra momba ny tenantsika. (Ohab. 3:7; Mpito. 7:16) Amin’izay isika dia tsy ho mora manome tsiny an’i Jehovah rehefa misy zavatra ratsy mitranga.
14, 15. Inona no tokony hataontsika mba tsy hisy vokany eo amintsika ny teny mahakivy lazain’ny hafa?
14 Aza avela hisy vokany eo aminao ny teny mahakivy lazain’ny hafa. Betsaka ny zavatra efa nataon’i Jehovah ho an’ny Israelita tamin’ny andron’i Mosesy, ka tokony ho nino izy ireo hoe hanampy azy ireo ho tody any amin’ny Tany Nampanantenaina i Jehovah. (Sal. 78:43-53) ‘Nanadino ny zavatra nataon’ny tanan’Andriamanitra’ anefa izy ireo, rehefa nandre ny tatitra ratsy nolazain’ireo iraka folo tsy nanam-pinoana. (Sal. 78:42) Ho akaiky kokoa an’i Jehovah isika raha misaintsaina ny asany, izany hoe mitadidy ny soa rehetra nataony ho antsika. Tsy ho tafasaraka amin’i Jehovah mihitsy isika raha manao izany, na dia eo aza ny teny mahakivy lazain’ny hafa.—Sal. 77:11, 12.
15 Ahoana kosa raha tia manakiana an’ireo mpiray finoana amintsika isika? Mety hanimba ny fifandraisantsika amin’i Jehovah izany. (1 Jaona 4:20) Tsy faly, ohatra, ny Israelita ka nimenomenona noho i Arona notendrena ho mpisoronabe. Noheverin’i Jehovah ho toy ny hoe nimenomenona taminy izy ireo. (Nom. 17:10) Toy izany koa fa toy ny hoe manakiana an’i Jehovah isika, raha manomboka manakiana an’ireo olona ampiasainy hitarika eo anivon’ny fandaminany.—Heb. 13:7, 17.
16, 17. Inona no tokony hotadidintsika rehefa manana olana isika?
16 Tadidio fa tsy i Jehovah no mahatonga ny olana mahazo antsika. Mbola te hanampy an’ireo Israelita tamin’ny andron’i Isaia i Jehovah, na dia niala taminy aza izy ireo. (Isaia 1:16-19) Mampahery antsika ny mahalala fa miahy sy te hanampy antsika foana i Jehovah, na inona na inona olana mahazo antsika. (1 Pet. 5:7) Mampanantena mihitsy izy fa hanome ny hery ilaintsika mba hiaretana.—1 Kor. 10:13.
17 Mety hijaly noho ny tsy rariny isika, toa an’i Joba lehilahy tsy nivadika. Ilaintsika anefa ny mitadidy fa tsy i Jehovah no mahatonga izany. Tia rariny izy, ary mankahala ny tsy rariny. (Sal. 33:5) Enga anie isika hanahaka an’ilay naman’i Joba atao hoe Eliho, izay nilaza hoe: “Sanatria an’ilay tena Andriamanitra ny hanao ratsy, ary sanatria an’ilay Mahery Indrindra ny hanao ny tsy rariny!” (Joba 34:10) Tsy i Jehovah no mahatonga ny olana mahazo antsika. Mpanome ny “fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra” kosa izy.—Jak. 1:13, 17.
18, 19. Nahoana isika no tsy tokony hiahiahy an’i Jehovah mihitsy? Hazavao amin’ny ohatra.
18 Aza miahiahy an’i Jehovah mihitsy. Lavorary i Jehovah ary ambony lavitra noho ny antsika ny heviny. (Isaia 55:8, 9) Tokony hanetry tena àry isika ka hiaiky fa voafetra ny zavatra fantatsika. (Rom. 9:20) Mahalana isika vao mahalala ny zava-misy rehetra momba ny toe-javatra iray. Azo inoana fa tsapanao hoe marina ity ohabolana ity: “Izay miteny aloha no toa marina, mandra-piavin’ny ankilany hanohitra ny voalazany.”—Ohab. 18:17, Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara.
19 Aoka hatao hoe manana namana tena atokisanao efa hatramin’ny taona maro ianao. Raha tsy azonao ny antony anaovany zavatra iray, na hafahafa ny fahitanao an’ilay zavatra ataony, tonga dia hiampanga azy ho manao ratsy ve ianao? Sa kosa ianao hiaiky hoe tsy fantatrao ny zava-misy rehetra, ka hatoky azy ihany ianao? Raha ny namantsika tsy lavorary aza atokisantsika toy izany, mainka fa ilay Raintsika any an-danitra! Ambony lavitra noho ny antsika mantsy ny lalany sy ny fiheviny.
20, 21. Nahoana isika no tsy tokony hanome tsiny an’i Jehovah mihitsy rehefa manana olana?
20 Tadidio ny tena mahatonga ny olana mahazo antsika. Ilaina izany satria isika ihany indraindray no mahatonga ny olana sasany mahazo antsika. (Gal. 6:7) Aza manome tsiny an’i Jehovah rehefa mitranga izany. Fa nahoana izany no tsy mety? Eritrereto hoe nandeha mafy loatra ny mpamily fiara iray, teo amin’ny fiolahana tery kely. Nidona àry ilay fiara ary potika. Tokony hanome tsiny ny orinasa namorona an’ilay fiara ve ilay mpamily? Mazava ho azy fa tsia! Izy no nisafidy ny handeha mafy. Toy izany koa isika. Nataon’i Jehovah afaka misafidy isika sady nomeny tari-dalana mba hahaizantsika manapa-kevitra. Tsy tokony hanome tsiny azy àry isika, raha mahita olana noho ny safidy tsy nety nataontsika.
21 Tsy vokatry ny fahadisoantsika na ny tsy nety nataontsika daholo anefa ny olana mahazo antsika. ‘Mety ho azon-tsampona amin’ny fotoana tsy ampoizina’ koa isika. (Mpito. 9:11) Tsy tokony hohadinointsika mihitsy koa fa i Satana Devoly no tena mahatonga ny faharatsiana. (1 Jaona 5:19; Apok. 12:9) Izy no fahavalontsika fa tsy i Jehovah.—1 Pet. 5:8.
AROVY NY FIFANDRAISANAO AMIN’I JEHOVAH
Notahin’i Jehovah i Josoa sy Kaleba satria natoky azy (Fehintsoratra 22)
22, 23. Inona no tokony hotadidintsika raha mahakivy antsika ny olana mahazo antsika?
22 Tadidio ny ohatr’i Josoa sy Kaleba, rehefa tojo olana na zava-tsarotra ianao. Nanao tatitra tsara izy ireo, fa tsy toa an’ireo iraka folo hafa. (Nom. 14:6-9) Hita hoe nino an’i Jehovah izy ireo. Na izany aza, dia tsy maintsy nirenireny tany an-tany efitra nandritra ny 40 taona izy roa lahy, niaraka tamin’ny Israelita hafa rehetra. Nihevitra ve izy ireo hoe tsy rariny izany, ka nimenomenona izy ireo na tezitra? Tsia. Natoky an’i Jehovah izy ireo, ka notahiny. Maty tany an-tany efitra ny ankamaroan’ny Israelita, fa izy roa lahy kosa tody soa aman-tsara tany amin’ny Tany Nampanantenaina. (Nom. 14:30) Hotahin’i Jehovah koa isika raha “tsy reraka” manao ny sitrapony.—Gal. 6:9; Heb. 6:10.
23 Inona no tokony hataonao raha mahakivy anao ny olana mahazo anao, na ny fahadisoan’ny hafa, na ny fahadisoanao? Mifantoha amin’ny toetra faran’izay tsara ananan’i Jehovah. Alao sary an-tsaina ny zavatra tena tsara ampanantenainy anao. Eritrereto hoe: ‘Ho nanao ahoana ny fiainako raha tsy teo i Jehovah?’ Miezaha ho akaiky azy foana, ary aza avela ho tezitra aminy mihitsy ny fonao!
Hizara Hizara Aza ‘Tezitra Amin’i Jehovah’ Mihitsy